ထုံးစံရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံနှိပ်စက္ဏူထူတံဆိပျကိုတိပ်ခွေ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:custom Printed ပုံးတံဆိပျကိုတိပ်,စက္ဏူထူအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်တိပ်,မိုးသည်းထန်စွာ Duty Clear ကိုတိပ်
ထွက်နိုင်ရေး: 400 millions square meter/year
Supply နိုင်ခြင်း: 30 millions square meters/month
တံဆိပျကို .carton ရေ-based 1 ကိုက် (y) သည် = 0.9144 မီတာ (ဍ): အများအားဖြင့် 38-80u / အသုံးအများဆုံးပိတျထားသောရော်ဘာအထူ: 50u, 48u, 42u, 40u.heavy တာဝန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိပ်ကော် type ကိုတိပ်ခွေအထူပိတျထားသောထုံးစံပုံနှိပ်စက္ဏူထူ တိပ်ခွေကိုရွေးပါနဲ့တည်ဆောက်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ပေမယ့်အရောင် swatches ပေးရမညျ။
ဆိုမေးခွန်းများကို OEM / လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးလွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အများပြည်သူရန်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရရန် 2. တစ်ခုကစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုလမ်း
Q3: သင်ပုဂ္ဂလိကလိုဂို / တံဆိပ်အတွက်ထုပ်ပိုးပေါ်ပုံနှိပ်ခံရနိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကလိုဂို / တံဆိပ်သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာခွင့်ပြုချက်အပေါ်မှာထုပ်ပိုးပေါ်ပုံနှိပ်နိုင်ပါသည်ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ OEM ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးကူညီ။
A: စျေးနှုန်းကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ဦးစားပေးအဖြစ်သင့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ယူပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အီးမေးလ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ .Please ရဖို့အရေးတကြီးလျှင်ကျနော်တို့များသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရတဲ့ပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်းကိုးကား။
A: ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' need.We ထောက်ပံ့ရေး OEM ဝန်ဆောင်မှုပြုပါဖြည့်ဆည်းဖို့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
ဖြေကျနော်တို့ T က accept / T ကဖြစ်ပြီး 70% ပြီးနောက် B / L ၏မိတ္တူကိုမြင်ရ, ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းနှင့် 30% သိုက်မှတဆင့်ပေးဆောင်နိုင်ပါ။
ဖြေလက်ခံရရှိ desposit ပြီးနောက် 10-15 ရက်အတွင်း။
Dongguan yalan ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ Co. , 18000 စတုရန်းမီတာဧရိယာကိုဖုံးနှင့်အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ယန္တရားများနှင့်စစ်ဆေးရေးတပ်ဆင်ထားသည်စက်ရုံ Dongguan တွင်တည်ရှိသည်, 2009 တွင်မွေးဖွား ltd.was equipment.Yalan သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, အရောင်းနှင့်အပြီးပေး ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းထုပ်ပိုးအတွက် -sales န်ဆောင်မှု။
Created ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် [Yanlan ".Yanlan ယခု 50 နီးပါးတိုင်းပြည်များတွင်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် 200 ခန့် people.We အဆိုပါ ISO9001 ချီးမြှင့်ကြသည်လုပ်ကိုင်: 2012 ခုနှစ်, 2008 ခုနှစ်, အရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အအောင်လက်မှတ်။
4 အမျိုးအစားထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရောင်းချ Yanlan:
1. PE လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်စီးရီးထုတ်ကုန်
2. BOPP တိပ်စီးရီးထုတ်ကုန်
3. PP / ပေသိုင်းကြိုးစီးရီးထုတ်ကုန်
4. Pack စက်
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ပိတျထားသောတိပ် > ပုံနှိပ်တိပ်
custom ပုံနှိပ်လိုဂို Super Clear Sellotape အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လိုဂိုနှင့်အတူလက်ကားစျေးနှုန်းဆုကြေးဇူးကို box ကိုထုပ်ပိုးတိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ဏူထူတံဆိပ်ခတ်တိပ် / Cintas က de Embalaje အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တိပ်ထုပ်ပိုးမြင့်မားသောကော်မိမိစိတ်ကြိုက် Logo Printed Bopp အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Logo နှင့်အတူ Bopp စိတ်တိုင်းကျ Printed ကော်တိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နယူးကော်ပုံးတံဆိပျကိုတိပ်စိတ်တိုင်းကျ Printed တိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
custom Printed BOPP လိုဂိုနှင့်အတူတိပ်ထုပ်ပိုး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
custom Printed ပုံးတံဆိပျကိုတိပ် စက္ဏူထူအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်တိပ် မိုးသည်းထန်စွာ Duty Clear ကိုတိပ် custom ပုံးတံဆိပျကိုတိပ် ကော်တံဆိပျကိုတိပ် Clear ကိုပုံးတံဆိပျကိုတိပ် Kraft စက္ကူတံဆိပျကိုတိပ် ရေစိုခံတံဆိပျကိုတိပ်